अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी बिचल्ली बनाउने कन्सल्ट्यान्सीहरुलाई जोगाउने गरी सरकारी प्रतिवेदन
पत्रपत्रिकाबाट , २९ फाल्गुन २०७५, बुधबार, ०८:३० am
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यार्थीले सरकारी समितिमा कुनै उजुरी नदिएकाले कन्सल्टेन्सीलाई के कारबाही गर्ने ? भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ । अष्ट्रेलियास्थित एआइबिटी कलेजमा नर्सिङ विषय अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम सत्र पूरा हुनु अगावै अष्ट्रेलियन सरकारले सो कलेज बन्द गराएको कारण नेपाली बिद्यार्थी अलपत्र परेका थिए ।
कलेज बन्द भएपछि अलपत्र विद्यार्थीले कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै संचारमाध्यम समेत गुहारेका थिए । मन्त्रालयद्धारा गठित समितिले पीडित विद्यार्थी र आफन्तलाई उजुरी दिन आब्हान गरेको थियो । तर कुनै पनि विद्यार्थीले उजुरी नदिएको कारण कस्लाई के कारवाही गर्ने भन्ने विषय खुलेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । एउटा मात्रै प्रतिवेदन भएकोले मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुस भन्दै सचिवलाई उपलब्ध गराएको कारण सो प्रतिवेदनको विषयमा मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीलाई जानकारी छैन ।
समितिले इक्यान, आइरिन, फेकन र नायर संस्थाका अध्यक्षसँग पीडित विद्यार्थीको तथ्याङ्क माग गरेको थियो । कन्सल्टेन्सीले ७४३ विद्यार्थी अलपत्र परेको उल्लेख गरेतापनि २४४ जनाको मात्र नाम उपलब्ध गराएका थिए ।
प्रचार गरिए भन्दापिडित विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि समिति आफै अलमल्ल परेको छ । एआइबिटीले नेपालमा आफ्ना ४ सय ६० एजेन्ट रहेको उल्लेख गरेपनि ७५ जनाले मात्रै विद्यार्थी पठाएको उल्लेख छ । कलेजको वेवसाइटमा भन्दा पनि कम कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाएको विषयमा मन्त्रालयले पुन छानविन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिवेदन फितलो देखिएपछि मन्त्री पोखरेलले पुन अनुसन्धान गर्न सचिवलाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ । तपार्इहरुको प्रतिवेदनले ठोस निर्णय दिएन, पुन छानविन प्रकृया अघि बढाउनुस– मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– फितलो देखिएको प्रतिवेदनको विषयमा पुनः अध्ययन हुनेछ । समितिले एआइबिटी कलेजमा पठाउने कन्सल्टेन्सीका अधिकारीसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।
परामर्शदाता संस्थाले १५३ कन्सल्टेन्सीमार्फत एआइबिटीमा विद्यार्थी पठाएको उल्लेख गरेका थिए । तर मन्त्रालयमा ७५ कन्सल्टेन्सीले मात्र विद्यार्थी पठाएको तथ्य प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा रहेका अन्य कन्सल्टेन्सीले कानुन विपरित एआइबीटीमा विद्यार्थी पठाएको आशंका गरिएको छ । मन्त्रालयले ठोस निश्कर्ष नआएसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार एआइबिटीमा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्न बिसं २०७३ सालमा ४, २०७४ मा २८ र २०७५ सालमा १४३ जना विद्यार्थी गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर उक्त संख्या नै गलत भएको हुनसक्ने मन्त्रालयको आंकलन छ ।
अनुसन्धानको क्रममा मन्त्रालयले अष्ट्रेलियन दूतावाससँग सल्लाह लिएको थियो । दूतावासका अधिकारीले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने पहल गर्ने जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो देशको कलेज र त्यहाँको प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन नै नगरी विद्यार्थीलाई भीसा दिनु अष्ट्रेलियन सरकारको गल्ती भएको बताए ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालमै भएका सामान्य विषय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृति नै गलत भएको बताए । उनले भने– अब सरकारले विशेष र नेपालमा नभएका विषयमा मात्र अध्ययन गर्न जाने व्यवस्था मिलाउने तयारी गर्न लागिएको छ ।
पोखरेलले समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्र थप जानकारी दिने बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमा मन्त्रालयले गहन अध्ययन गर्ने र आवश्यक रहेमा पुनः छानविन गरिने जानकारी दिए ।
अष्ट्रेलियाको कानुनका कारण विद्यार्थीहरु समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नै देशमा विवादित कलेजमा अध्ययन गर्न भिषा दिन अष्ट्रेलियाली सरकारसँग गम्भीर विषयमा बारेमा मन्त्रालयस्तरबाट छलफल गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशी संस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै कन्सल्टेन्सीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विदेश पठाउने संस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ ।
अष्ट्रेलियन सरकारले १९ फेब्रुअरी २०१९ बाट कलेज दर्ता खारेजीमा परेको थियो । हाल सो कलेजले कानुनी प्रक्रियाका लागि अपिल गरेको छ । मार्च २७ मा अष्ट्रेलियन सरकारले एआइबीटीको विषयमा सुनुवाई गर्ने भएको छ । कलेज खारेज गरेको निर्णय भएको मितिले २८ दिन भित्र उक्त कलेजले अपिल गर्न पाउने वैधानिक व्यवस्था अनुसार कलेजले अपिल गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा इक्यानका अध्यक्ष बिष्णुहरी पाण्डे, फेकनका अध्यक्ष युवराज कटवाल, आइरिनका अध्यक्ष कुमार कार्की र नायरका कोषध्यक्ष मनोज पराजुलीले अष्ट्रेलियामा अलपत्र विद्यार्थीहरुको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
फेकनका अध्यक्ष कटवालले संचारमाध्यममा आएजस्तो गरी विद्यार्थीबीच धेरै समस्या नभएको जिकिर गरे । इक्यानका पुर्व अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले मन्त्रालयले छानविन गरिरहेको अवस्थामा अहिले नै कति विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ? भन्ने विषयमा जानकारी दिन नसकिने तर्क गरे ।
उनले भने– विभिन्न कन्सल्टेन्सीमार्फत विद्यार्थी पुगेका छन्, कस्ले कति पठाएका छन् भन्ने तत्काल संख्या निकाल्न सकिन्न ।
बिद्यार्थी बिचल्ली पार्ने कन्सल्ट्यान्सीहरुको अष्ट्रेलियामा अवैध शाखा कार्यालय
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीको बढ्यो व्यापारले जन्मायो समस्या
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी बिचल्ली पार्ने कन्सल्ट्यान्सीहरु भन्छन्– समस्या समाधान…
बंगलादेशमा कालो सूचीमा परेका ३७ मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छसय नेपालीको भविश्य अन्योलमा
कुटाइ खाने सचिवलाई समेत दोषी देखाएर कुट्ने मन्त्रीलाई छानविन समितिले चोख्याउन खोज्यो
ल्यापटप चोरेर चोरले पठायो यस्तो भावुक इमेल
म उता भगवानको पूजा गर्न थालें, यता पापीले मेरी मुनाको हत्या गरिदिएछः पूर्वसचिव कार्की
जस्ताको तस्तै संसदबाट एमसीसी पारित नगरे मान्य नहुने अमेरिकी चेतावनी
कोरोना भाइरस चिनियाँ अर्थतन्त्र सिध्याउन अमेरिकाले फालेको जैविक हतियार पनि हुनसक्छः कँडेल
धौवादीको फलाम झिक्ने जिम्मा डा. सोमनाथ सापकोटालाई, आइपीओ पनि आउने
निर्माणाधिन ‘फाष्ट ट्राक’सहित सबै राजमार्गहरु कंक्रिटबाट बनाउन पहल सुरु
मौद्रिक नीति अर्ध बार्षिक समिक्षाः आसै आसमा बैंकर, राष्ट्र बैंक आफ्नै ‘स्ट्याण्ड’मा
साठी लाख घुस खाएको अभियोगमा असई बिरुद्ध मुद्दा दायर
देशको चालु खाता ८४ अर्बले घाटामा, शोधनान्तर स्थितिमा भने केही सुधार
ग्लोबल आइएमई बैंकले गर्यो आमा घर सेवा आश्रमलाई तीन लाख सहयोग
नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकृत विरुद्ध मुद्दा
चौधरी ग्रुप भन्छ– एसटीएमले प्रतिस्पर्धामा काम गर्न पुँजीगत अनुदान पाएको हो, उपहार होइन्
‘भ्यालेन्टाइन डे’को अवसरमा धुलिखेलमा जीपीएक्स बाइकर्स नाइट आउट र स्टन्ट शो
परिसंघको नयाँ महानिर्देशकमा पौड्याल नियुक्त, यसअघि कार्यरत न्यौपाने वरिष्ठ सल्लाहकार
व्यक्तिले दर्ता गरेको २६४ बिघा जमीनको दर्ता बदर, ‘सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन पाइदैन’
मेगा बैंकलाई दोहा बैंकले दिने भयो दुई अर्ब २५ करोड रुपियाँ ऋण